Asa soa: Mitohy ny fanampiana ataon’ny Assanati Famo Gidraka
vendredi, 09 février 2018 16:45
Nifanosehana ny fanaterana antotan-taratasy hidirana ho mpikambana ao amin'ny Assanati Famo Gidraka eto Mahajanga. Omaly tolakandro teo no nandraisana ireo olona sahirana maniry hisitraka ny asa soa ataon'ny fikambanana.
Mahatratra 1425 ireo mpikambana eto Mahajanga ankoatra ireo any amin'ny faritra samihafa. Ho fanamarihana sy fiarahabana ireo mpikambana rehetra nahatratra ny taona dia nozaraina vary isan'olona ireo rehetra tonga niaraka tamin'ny karatra maha mpikambana ary teo no ho eo ihany koa dia nahazo ny anjarany ireo nahafeno fepetra.
Tratra ary tafapetraka ny tanjona ho an'i Assanati Famo Gidraka amin'ny fanampiana ny mpiara-belona. Endrika misoritra hafaliana no nandraisan'ireo mpikambana ny fanomezana amin'izao taona vaovao izao.
Tsy hijanona ho an'i Mahajanga ihany moa fa mbola hahazo ny anjarany ny any amin'ny faritra tsirairay araka ny teny filamatra hoe "Werawera tsy maintsy mandeha, tsika jiaby toujours avec Assanati Famo Gidraka".